War Deg Deg ah oo Naga Soo Gaaray Safaarada Mareykanka ee Muqdisho (Akhriso Warka) | Allbanaadir
War Deg Deg ah oo Naga Soo Gaaray Safaarada Mareykanka ee Muqdisho (Akhriso Warka)
Elizabeth Shackelford oo ahayd sarkaalka siyaasadda ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay isaga tagtay shaqadaas iyada oo sheegtay in ay u adkeysan weysay dhaqanka Maamulka Trump ee Afrika.
Elizabeth Shackelford,ayaa sheegtay in Madaxweynaha Mareykanka iyo Xoghayihiisa arrimaha dibadda aysan muhiimadda siin Afrika sidoo kalena aysan la socon xuquuqda aadanahga Afrika iyo danaha Mareykanka ee Qaaradda Afrika.
Waqradda Gabadhan qortay oo ku taariikheysan 8ddii December ayey ku sheegtay in Mareykanka uu ka leexday siyaasaddiisa dibadda islamarkaana maamulka Trump uu gabay sharciga dibadda ee Mareykanka.
Haweeneydan ayaa ku doodday in Sanadkii 2010kii ay ka tagtay shaqo gaar loo leeyahay kuan biirtay dowladda Mareykanka,iyada oo ka shaqeysay Washington,Koofurta Suudaan,Poland iyo Soomaaliya.
Hadda waxaa ay ku doodeysaa in iyada oo ka xun ay shaqadaas ka tagtay maaddaama dulqaadka uu ka dhamaaday maamulka Trumpna aysan daneynneyn amniga muwaaddiniin Mareykanka ah ee Afrika,Xuquuqda aadanaha iyo qiyamka guud ee Mareykanka.
Bishii October ee Sanadkan waxaa isna xilka danjiraya Mareykanka ee Soomaaliya iska casilay Stephen Schwartz,kaas oo is casilaaddiisa ku sheegay mid shaqsiyadeed.
Elizabeth Shackelford, waxaa ay ku shaqeyneysan oo uu fadhigeedu ahaa Nairobi,waxaana ay hadda ku eedeysay siyaasadda arrimaha dibadda ee xilligan in aysan ahayn mid Mareykanka u qalanta.